Petite Sirah - Durif - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
Umvini obomvu ovuthiwe okhiqiza iwayini eligcwele elibomvu elakhiwe ngawo-1880 nguDkt Francois Durif ovela e-SyrahxPeloursin cross. Evelele eCalifornia, Petite Sirah nayo iyalinywa e-Argentina, eBrazil, eMexico nase-Australia. Kuthiwa kuphela into encane ('encane') mayelana neDurif amajikijolo ayo. Ikhiqiza iwayini elibomvu, i-tannic iwayini elibomvu.
I-Rhône Valley, eFrance
I-Petite Sirah ibizwa nangokuthi uDurif (ngemva kokusungula kwayo), okuyilona elisetshenziswa yiSA Wine Industry Information & Systems (SAWIS). I-Petite Sira akufanele iphuthelwe i-Petite Syrah, i-latter is a clone encane eyakhelwe ama-syrah amagilebhisi ahlukahlukene. Amanye amagama angaphezu kuka-35 eDurif akhona emhlabeni wonke okusetshenziswa kuwo amaDure, iDuret, Plant Durif nePinot de Romas (France).
I-Durif ayihlobene ne-California's Petite Sirah njengoba yasungulwa yi-DNA eminwe yeminwe ngo-1997.
Cishe ngo-114ha i-Durif itshalwe eNingizimu Afrika, isungulwe okokuqala ngo-Vititec ngo-2001.
Ukutshala kokuqala kwezohwebo kwakhiwe ngo-2004 epulazini i-Fairview ePaarl. Iningi le-114ha Durif litshalwe ezindaweni zaseBreedekloof (34ha) nasePaarl (31ha). Ukutshala okutsha kwama-24ha kwakhiwe ngo-2016.
Imifino eqinile yasePitit Sirah ingasinda ezinhlobonhlobo zenhlabathi futhi ibonisa ukukhula okunamandla futhi ifike ku-22-24 t/ha. Umvini unomkhuba wokwehla ukuze uguqulwe kakhulu ukhetha ukugcina ama-bunches avele phansi. Sitshala ekuphakameni okuphakathi kuya phezulu.
Amagilebhisi avuna phakathi nonyaka.
Amaqabunga aphakathi kwamakhulu, ngobukhulu, ama-pentagonal nama-five-lobed.
I-Petite Sirah inezithelo ezincane, eziqinile.
Ama-Clones anezinsimbi ezinamathele kakhulu angahle athambekele ekugqeni. Amajikijolo azwela ukushisa kwelanga.
I-Petite Sirah iyamelana ne-downy isikhutha, esenza saziwa eFrance ngekhulu le-18, nakuba kungavamile eFrance namuhla.
I-Durif isetshenziselwa ukwakha iwayini elibomvu eligcwele, kokubili njenge-varietal eyodwa noma njengengxube. Ngezingxenyana, lanezela isakhiwo se-tannic nombala obunzima.
Amawayini angaba mnandi kakhulu, aqinile, asematheni namnyama.
Amagilebhisi ayaziwa eCalifornia ngenxa yewayini layo elicebile elinamakhadi amnyama. Ephakeme ema-tannins, iwayini iyakwazi ukuguga isikhathi eside - iminyaka eyishumi kuze kube ngu-20.